Ku tabaruc Boostada ama Taleefan - Cuntooyinka Lugaha
Ku deeqo Boostada ama Telefoonka
Wax ku biirinta metals metals on Wheels adoo ku tabaruca taleefan ama boostada ayaa ah hab fudud oo lagu taageerayo gaarsiinta cuntada nafaqada leh waayeelka bulshadaada. Waxaan ku faraxsanahay inaan meel dhigno habka deeqda ee aad dooratay.
Ku tabaruca taleefanka:
Naga soo wac (612) 623-3363 inaad ku tabarucdo kaarka deynta ama wareejinta lacagaha elektarooniga ah (EFT). Shaqaalaheena saaxiibtinimada leh ayaa ku farxi doona inay kaa caawiyaan deeqdaada. Waxa keliya ee aad u baahan tahay waa inaad haysataa kaarkaaga amaahda ama jeeg la heli karo.
Si aad ugu tabarucdo boostada:
Dhammaystir annaga foomka deeqda, ama si fudud jeeg ugu dir cinwaanka soo socda:
1200 Washington Ave. S., Ste. 380
Xor ayaad u tahay inaad noo soo dirto qoraal haddii aad jeceshahay inaad wadaagto sababta aad ugu deeqayaan Cuntada Lugaha!
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan tabarucaad, fadlan nagala soo xiriir (612) 623-3363 ama at [email protected].